Lalamasaka Hatry ny Ela, auteur sur Lalamasaka Hatry ny Ela
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 4 septembre 2020 · Last modified 2 février 2021
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 31 août 2020 · Last modified 2 février 2021
Andriamanitra tsy azo vazivaziana.Ny vokatry ny fahotan’ny fahatanorana. Ny maha zava-dehibe ny manambady olom-boavonjy. Ny sazin’ny fanambadiana mpanota. Ireo fitandremana tokony hatao sy tokony ho fantatra mialohan’ny hidirana amin’ny fifamatorana amin’ny mariazy.Toriteny sy fampianarana ho an’ny tanora. Azon’ny mpitaiza tanora sy ny Ray aman-dReny manana tanora hakàna lesona hanoroana lalana azy ireo.